धरानमा २२ लाखमा पार्कसहितको जीम सञ्चालनमा आउने, धराने सबैले जीम गर्न पाउने::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरानः धरानमा पहिलोपटक धरानमा ‘आउटडोर जीम’ सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
धरानको वडा नं. १८ शिवमार्ग स्थित (आउटडोर) खुल्ला जीम सञ्चालनमा ल्याइने भएको हो । शनिबार धरान उपमहानगरका नगर प्रमुख तिलक राई र सोही वडाका वडाध्यक्ष प्रविण राई (नरेन्द्र) ले आउटडोर जीमको कार्य शुभारम्भ गरेका छन् ।
शिवमार्गस्थित खुल्ला जग्गामा पार्कसहितको आउटडोर जीमको निर्माण कार्य आजबाट सुरु गरिएको वडाध्यक्ष राईले जानकारी जानकारी दिए । उनका अनुसार टुइस्टर, राइड (साइक्लिङ), पुल चेयर, पुल अप, रबत्र ब्याण्डलगायतका ११ किसिमका आउटडोर जीमका सामाग्रीहरु राखिने भएका छन् ।
उनले सो स्थानमा टायल बिछ्याउने, बत्ती जडान गर्ने, फलामले जडित बस्ने ठाउँ, केटाकेटीका लागि पिङ, हेभिङ सेटअप र गार्डेन बनाउन बाँकी रहेको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा १८ नं. वडाका लागि २२ लाख रुपैयाँ बजेट परेको थियो । सो बजेटबाट पार्कसहितको आउटडोर जीम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । धरान-१८ को मात्र नभई अन्य वडाका मानिसहरुले समेत आएर आउटडोर जीम गर्न सक्ने वडाध्यक्ष राईले जानकारी दिए । विशेष गरेर धरानबासीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै आउटडोर जिमको अवधारणा वडाले ल्याएको उनको भनाई छ ।
नगर प्रमुख राईले धरानमै पहिलोपटक वडा नं. १८ ले पार्कसहितको आउटडोर जिमको अवधारणा ल्याएको बताउँदै प्रशंसा गरे । नगर प्रमुख राईका अनुसार विशेष गरेर फिजियोथेरापी गर्नेुपर्ने व्यक्तिहरु तथा ‘मर्निङवाक’ गर्न चाहने तर धेरै लामो बाटो हिँड्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकका लागि आउटडोर जीम उपयुक्त हुनेछ । साथै उनले जुनसुकै उमेर समूहकोले पनि ‘एक्सरसाइज’ गर्न सक्ने बताएका छन् ।
रोनाल्डोको कीर्तिमान र त्यो गोल, २०१६ मा जस्तै पोर्चुगलले जित्ला उपाधि ?